လူထု မောင်ကာဠု: အတော့ကို မွှေသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ
အတော့ကို မွှေသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ
ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ အတော့ကို မွှေသည်လို့ပဲ ဆိုရမယ်....... သူပေါ်လာပီး ပြည်တွင်းနေတွေကိုပါ နှဲ့သွားခြင်းဟာ ဒိကိစ္စတွေရဲ့ အစပျိုးခြင်းလို့ ဆိုရရင် လွန်မယ်မ ထင်ပါ...... ဘင်္ဂါလီကိစ္စတွေ ဖြစ်လာချိန်မှာ ပြည်တွင်းနေတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ အလွန်ကို အရေးကြီးပါ တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ အတန်တန် ပြောခဲ့ကြတယ်..... ခက်တာက ပြည်တွင်းနေထဲက တစ်ချို့တွေ ဟာ ရှေ့တစ်မျိုး၊ ကွယ်ရာတစ်မျိုးကနေ သိသိသာသာကို ကျူးကျော်သူ ဘင်္ဂါလီဘက်က ယိုင်းပင်းလာ တာကို တွေ့ရတယ်......
အထူးသဖြင့် မန္တလေး အခြေစိုက် နာမည်သုံးလုံးနဲ့ ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက်ကနေ စလိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ၊ မန္တလေး အခြေစိုက် နာမည်ကြီး စီးပွားရေး သမားကြီးကအစ ဘင်္ဂါလီတွေဘက် ကနေ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ရပ်တည်လာတာကို တွေ့ရတယ်.... တစ်ချိန်က ကျူးကျော်သူကို လက်မခံဘူး မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမယ်လို့ ကြွေးကျော်ခဲ့ပြီး အခုတော့ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ဘရားသားဟုဒ်နေ တာ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် သစ္စာဖောက်သွားပီလား မေးချင်လာ တယ်...... ပြည်တွင်းနေထဲ က မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေနဲ့ တစိတ်တ၀မ်းထည်းရှိတဲ့ တက်ကြွတဲ့လူတွေ ကြတော့လည်း ဘာသာတူခြင်းကနေ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စမှာ ၀င်မပါပဲ နောက်ဆုတ်နေ ခဲ့ရတယ်......
ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စကို ပြောင်ပြောင်တောင်းတောင် လုပ်ဆောင်နေသူကတော့ မန္တလေးက နာမည်ကြီး တောခိုကျောင်းသားဟောင်းရဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မလေးအခြေစိုက် ဆရာဝန်တစ်ဦးပါပဲ...... မိတ္ထီလာကိစ္စ မဖြစ်ခင်ကတည်းက အဆိုပါ မန္တလေးက ပြည်တွင်းနေ တစ်ချို့ဟာ မလေးမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပီး ခနဲ့တဲ့တဲ့၊ ရွဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ သာသနာပြုချင်လို့ မလေးသွားနေကြ တာလား ဆိုတဲ့ ပုံစံတွေ ရေးသားလာတာကို ကြည့်ပီး ဒီလူတွေ ဘာကြောင့် ဒီလိုပုံစံ ဖော်နေသလဲ စဉ်းစားမိလာတယ်...... ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မျက်နှာဖုံးစွတ်ပီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ အကောင့်တွေအများကြီး ရှိခဲ့သလို၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဘရားသားဟုဒ်ကို ရှေ့တန်း တင်လာတဲ့ မွတ်စလင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ အကောင့်တွေ တော်တော်များခဲ့တာကို သတိထားမိတယ်......
အထူးသဖြင့် အဆိုပါ အစွန်းရောက် မွတ်စလင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်၊ အကောင့်တွေက သွေးထိုးလှုံ့ဆော်စာတွေကို မြိန်ရည်ယှက်ရည် ဖော်ပြခဲ့၊ ရှယ်ခဲ့တဲ့ လူတွေဟာလည်း အဆိုပါ ဘက်ပြောင်းသွားပီး မိမိနေထိုင် တဲ့ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုမရှိတော့တဲ့ ပြည်တွင်းနေတစ်ချို့တွေ ဖြစ်နေတာ လည်း တွေ့လာရ တယ်.... အထူးသဖြင့် ၉၆၉ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အခြားဘာသာကို စော်ကားခြင်း အလျဉ်းမရှိပေမယ့် ၇၈၆ ကို ထိခိုက်လို့ဆိုပီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တုံ့ပြန်လာတဲ့ ပြည်တွင်းနေတွေ ၊ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့ မွတ်စလင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ အကောင့်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာလည်း မလိုလားအပ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ယူ သွားခဲ့တယ်......
လူသားခြင်း စာနာမှု ခေါင်းစဉ်တပ်ပီး လာခဲ့တဲ့ တူရကီကလူကြီး ခရီးစဉ်မှာ မိတ္ထီလာအပါအ၀င် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းက ပြည်တွင်းနေတွေ ဘက်တွေကို သွားရောက်ခဲ့စဉ်က တစ်ခုခု မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်း ခဲ့ပေမယ့် အဲ့ဒိနောက်ပိုင်းမှာ OIC ၀င်ခွင့်မရခဲ့တာကို မကျေနပ်တဲ့ ပြည်တွင်းနေတွေ ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် မှာ အတော့်ကို ကျယ်လောင်တဲ့ သွေးထိုးမှုတွေ စ လာတာကိုလည်း သတိထားမိတယ်.....
အခု ဖြစ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာလည်း ရွှေလာရောင်းသူကို ရွှေဝယ်သူက တစ်စုံတစ်ရာ မကျေလည်သည့်တိုင် ဥပဒေအရ ဆက်လက် မဆောင်ရွက်ပဲ လူမိုက်ဆန်ဆန် ရိုက်နှက်လွှတ်ခြင်းကလည်း ပဠိပက္ခကို အစပျိုးစေမယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ဘယ်သူ့အားကိုးနဲ့ လုပ်ခဲ့သလဲ မေးစရာ ဖြစ်လာတယ်...... ထို့အတူပဲ တက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ လူအများစု၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေးများ အပါအ၀င်က ပုံမှန်အတိုင်း လမ်းလျှောက်နေကြပေမယ့် လူတစ်ချို့က ခေါင်းပေါ်လက်တင်လို့ အတင်းအကြပ် ဖမ်းခေါ်ခံသွားရတဲ့ ပုံသဏ္ဍန် ဖော်ဆောင်သွားတာလည်း ဘယ်သူတွေရဲ့ အစီအမံတွေလည်း မေးချင်လာတယ်......
အကြမ်းဖက် ကိစ္စတွေ ဖြစ်တိုင်းမှာ ဖြစ်ရပ်ကို ဖန်တီးသူတွေဟာ အမြဲလိုလို လွတ်မြောက်နေတာကို ကြည့်ရခြင်းအားဖြင့်လည်း စနစ်ကျတဲ့ ဆုတ်ခွာမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသလား ထင်ရတယ်..... ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်လာအောင် နောက်ကွယ်က သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ ရှိနေသလို၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု နဲ့ ဖြစ်စေလိုတဲ့လူတွေ ရှိနေတာကိုလည်း သတိထားမိလာတယ်....... အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂါလီအရေးကို မွတ်စလင် ဘရားသားဟုဒ် ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်တဲ့ လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာလည်း သံသယရှိစရာတွေ ဖြစ် လာတယ်..... ဘင်္ဂါလီ လော်ဘီတွေနဲ့ ဘက်ပြောင်းသွားတဲ့ ပြည်တွင်းနေတစ်ချို့ဟာ ဒီကိစ္စမှာ သိသိသာသာကို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်စာတွေ ဖြန့်လာတာလည်း တွေ့ရတယ်.....
အဲဒိအတွက် ပြည်တွင်းနေတွေအနေနဲ့ မိမိနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိစေချင်သလို ဘင်္ဂါလီနဲ့ ဘာသာရေး ရောထွေးပီး ဘရားသားဟုဒ် ပုံဖော်ပြီး မိမိနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ပုတ်ခတ်၊ စော်ကားနေခြင်း များ ပြုလုပ်နေတဲ့ မိမိလူမျိုးတွေကို မိမိတို့အခြင်းခြင်း ပြန်လည်ထိမ်းသိမ်းဖို့ လိုပါတယ်. .... ကြက်သွန်နဲ့ အပေါင်းကောင်းလို့ အထောင်းခံရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါ....... နိုင်ငံက နလံထူခါစမှာ ပြဿနာတွေအများကြီးနဲ့ ယိုင်လဲမသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်......
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းနေတွေအနေနဲ့ Be Honest ရိုးသားကြပါ၊ Be Loyalty မိမိနေတဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာ သစ္စာရှိကြပါ၊ Build Trustworthy ခေါ်တဲ့ မိမိနေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ရှိ လူမျိုးများနဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေကို တည်ဆောက်ယူပြီး မိမိနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံက ဘာသာမတူသူတွေကို ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်၊ အာဏာပိုင်နဲ့ပေါင်းပီး အနိုင်ကျင့်ခြင်းများကို ရပ်တမ်းကရပ်သင့်ပါပီ......
ရိုးသားမှုနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ အနာဂါတ်ကို ဖန်တီးသွားကြပါ......
Be Honest, Be Loyalty to your Country and Build Trustworthy with native people. လို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်....
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 08:53
မိတ်ဆွေတို့ ၏ ဆွေးနွေးမူ ဝေဖန်မူအား လိူက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်
၈၈ကျောင်းသား နိုင်ငံရေး အတိုတ်ခံများ
၉၆၉ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှာမှု
Blog Archive September (3) August (6) July (3) May (29) April (86) March (21) February (5) November (7) October (28) September (11) August (43) July (76) June (149) May (257) April (467) March (180) February (83) January (103) December (102) November (39) October (20)
၀န်ကြီးဋ္ဌာန website များ
ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတဲ့ NLD ရဲ့ ခေတ်သစ်မဲဆွယ်နည်း
မောင်ကာဠုထံ စာမူ သတင်းများနှင့် အကြံပေး၊တိုင်ကြားလိုလျှင်
786 ဆိုင်များတွင်း ဈေးဝယ်ခြင်းကို
မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ကာမမုဆို ရန်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်အောင်လို့ပါ
ညီနေမင်းဆိုတဲ့ နည်းပညာသမားအယောင်ဆောင် ကာမမုဆိုကို မြန်မာမိန်းခလေးများ ရှောင်ဖို့အတွက် အရိပ်ခြေနေတစ်ခုတည်းကိုသာ မောင်ကာဠုထံကိုပေးပို့လာ...
ဆေးရည် တစက်နှစ်စက်လောက် ထည့်စမှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ပဲ အတွင်းသား တွေကို အသားတက်စေပြီး အတွင်းဆွဲအား ပြင်းလာ...
လိင်ဇာတ်လမ်းတွေ လတ်တလောရိုက်ကူးရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းသမီးဆိုး(Thet Koko) ငြင်းဆို
ယခုတစ်လော လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် လူအများစိတ်ဝင်စားနေကြသည့် သမီးဆိုး(Thet Koko)၏ လိင်အသားပေး ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမည့်သတင်းသည် မဟုတ်မှန်ေ...
အစ္စလာမ်မှာ သူတော်စင်ဆိုတာ ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ခေါ်တာပါလဲ။
ရွံ၊နွံ မစင်တွင်းမှာ လူးနေသော လူတစ်ယောက်ကို ဆယ်ယူပြီး ရေမိုးချိုး၊ သန့် စင်ပေး၊သန့် ရှင်းသော အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ပေးပြီး ထိုသူကို မစင်တွင်း...
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကို Sexually transmitted disease သို့မဟုတ် venereal diseases (VD) လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။ STD ဆိုတာဟာ လူသားေ...
အလ္လာဟ်နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာအယူဝါဒ ကျဆုံးတော့မှာ ဖြစ်တယ်
တနေရာတည်းတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ ဆန့် ကျင်နေတာ ကုရ်အန်ကျမ်းနဲ့ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ရှရီးယားဥပဒေကို ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ခွေးသား ၀က်မြေ...
ကမ္ဘာကျော် Michael Learns to Rock အဖွဲ့သည် လေးဆူး ဓါတ်ပုံမြတ်ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့လာရောက်အဖူမြော်ကြည်ညိုပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ မေတ္တာရိပ်ကို လာခိုလှုံစဉ်...
“လူ့အခွင့်အရေး လေးစားတော်မူသော ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား”
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာ “ငါက လွဲလို့ တစ်ခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ဒူးမထောက်ရ” ပုံစံမျိုးဖြင့် အာဏာရှင်ဘုရားဘဝမျိုးကို အရောက်မခံခဲ့ပါဘူ...
ညီနေမင်းအကြောင်း+ အသံဖိုင်+ ငွေလွဲစာ+ ခြိမ်းခြောက်စာ
မသိတာတွေကိုမတင်ဘူး သိတာကိုပဲတင်တယ်။မတိကျရင်မတင်ဘူး တိကျမှ အထောက်အထား အချက် အလက်ပြည့်စုံမှတင်တယ်။သက်သေတွေမရှိရင်မတင်ဘူး သက်သေအနေနဲ့ ...
တစ် ​ပါတ်​လျင် နှစ်​ကြိမ်​မျှ​​ လိင်​ ဆက်​ဆံ​ခြင်း​သည်​ အ​မျိုး​သား​ များ​အား​​ ကျန်း​မာ​ရေး ကောင်း​မွန်​စေ​ကြောင်း​ပညာ​ရှင်​များ​က ...
NLD ပါတီတွင် သာကူးတွေ၊ သူခိုးတွေ ရှိ ဟု ဦးဝင်းတင် ပြောပြီ - NLD ပါတီတွင် သာကူးတွေ၊ သူခိုးတွေ ရှိ ဟု ဦးဝင်းတင် ပြောပြီ NLD ပါတီတွင် သာကူးများ ရှိကြောင်း၊ သူခိုးများရှိကြောင်း NLD ပါတီ ဗဟိုနာယကအဖွဲ့ဝင် ဟံသာဝတီ ဦးဝ...
KIA ( ကချင် ) သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ မှ မိုင်ထောင်ဖောက်ခွဲယုံသာ မကပဲ ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင် ပြုလုပ်လာ - နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု လွယ်ကူချောမွေ့ စွာ ဆက်သွယ် သွားလာနိုင်ရေး အတွက် လမ်းတံတားများအား ဘဏ္ဍာငွေ မြောက်များစွ...
အဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် ထွန်း ဖောင်ဒေးရှင်း ၂၀၁၃ စာပေ ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပ - ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ တွင် ရန်ကုန် မြို့ ရန်ကင်း မြို့နယ် စည်ပင် လမ်းသစ် ရှိ မြန် မာ နိုင် ငံ ဘဏ်များ အသင်း အဆောက် အအုံ ဇမ္ဗူရစ် ရွှေစင် ခန်းမ ...
စာမဖတ်တတ်သူ အားလုံး ကြားဖို့၊
ဒီမှာနေတာ ကြာလှပြီး၊ သူတို့လဲ
ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်